January 4, 2021 - Babal Khabar
Jan42021 by बबाल खबरNo Comments
सरकारी गाडी घाँस बोक्ने र तरुनी बोक्ने गरेको पाईएपछि जाजरकोटमा आगजनी, सहि गरे कि गलत ?
काठमान्डौ -: कर्णाली प्रदेश अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति गणेशप्रसाद सिंह चढ्दै आएको गाडीमा आगजनी भएको छ। प्रदेश सभा सांसद सिंह जाजर कोटबाट निर्वाचित हुन् ,कर्णाली प्रदेश ०२ ००१ झ ००४० नम्बरको उक्त गाडीमा भेरी नगरपालिका ७ पुनमा गएराति अन्दाजी १० बजे अज्ञा त समुहले आग जनी गरेको पाईएको हो’। गाडी आजग नीबाट पूर्ण रुपले क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाज रको टले जनाएको छ’ । गाडी किन जाज रकोटमा गएको थियो भन्ने भने खुलेको छैन ,उक्त नब्मरको गाडी केहि महिना अगाडीमात्र घाँस बोक्नमा प्रयोग भएको थियो ,तेस्तै सो गाडी कहिले होटेलमा तरुनी बोक्ने कार्यमा समेत प्रयोग भएको पाईएपछि वि वादमा ता नीएको थियो’। https://theabpresentsnepal.com/ बाट साभार गरीएको हो ।
बी बी सीले सार्वजनिक गरेको एक सय प्रभावशाली र प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा पर्न सफल १९ वर्षीया सपना रोका मगर यतिबेला बिरामी भएर घरमा आराम गरिरहेकी छिन् । गत मंसिर ८ गते बीबीसीले सार्वजनिक गरेको एक सय प्रभाव शाली र प्रेरणा दायी महिलाको सूचीमा १९ वर्षीया सपनालाई पनि छनोट गरिएको थियो। सपना सडकका बेवारिसेलाई खाना खुवाउने र बेवारिसेको अन्त्येष्टि गर्ने कार्यमा सक्रिय छिन्. अर्को खबर, संचारकर्मी रवी लामिछानेले न्युज २४ च्यानल छाड्ने भएका छन् । उनले छाड्ने भएपछि चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ बन्द हुने भएको छ । ‘सिधा कुरा जनतासँग’ न्युज २४ च्यानलमा ५ वर्षदेखि प्रसारण हुँदै आइरहेको छ । रवी लामिछाने लगायतको एउटा समूहले नयाँ टेलि भिजन संचालन गर्ने तयारी गरेकाले कार्यक्रम बन्द हुने बताइएको छ । टेलिभिजन बाट लामिछाने लगाय तको समुहले केहि समय अघि नै राजीनामा दिइ सकेका छन् । नयाँ
विवाह पछि परेको पतिको पहिलो जन्म दिनमा स्वेताले दिइन् यस्तो सरप्राइज
काठमाडौ – नायीका स्वेता खड्कासंग विवाह भएपछि उनका पतिको पहिलो जन्मदिनमा स्वेताले निकै प्रेमिल सरप्राइज दिएकी छन् । उनी एक महिना अघि मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय स्वेताले आफ्ना पतिलाई निकै प्रेमिल ढंगले जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छन् । उनले पति संगका रमाइला तस्बिर सार्वजनिक गर्दै स्टाटस लेखेकी छन् । पहिलो वैवाहिक जीवन अकल्पनीय रुपमा दुःखद बनेका कारण ६ वर्ष सम्म एकल जिवन विताएकी स्वेता अहिले भने वैवाहिक जिवनको आनन्द लिँदै छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले साझा गर्ने गरेका पोस्टहरुले यस्तै संकेत गर्छ । आफ्ना पति विजयेन्द्रसिंह रावतको जन्मदिनमा पनि स्वेताले प्रेमले भरिएका सन्देश सामाजिक सञ्जालमार्फत साझा गरेकी छन् ।शनिबार बिहान १२ बजे फेसबूकमार्फत ‘सार्वजनिक रुपमा’ उनले आफ्ना पतिलाई जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । ‘मेरा प्रिय पति, मेरा गल्तीहरुको सहया
काठमाडौ । आफ्नै श्रीमानले भारतमा लगेर बेचेको घ'टना सार्वजनिक भएको छ । श्रीमानसंग भारत गएकी उनलाई श्रीमानले नै बेचेर आए पछि उनी भागेर नेपाल आइपुगिन् । श्रीमानले भारतमा अरु पुरु षसंग सम्ब'न्ध राख्न समेत लगाएको महिलाले बताएकी छन् । धनगढीकी महिला अहिले भागेर नेपाल आएपछि घट'नावारे जानकारी गराएकी छन् । छोरासंगै भारत गएकी महिललाई छोरासंगै बेचेको महिलाले बताएकी छन् । आफु बेचिएको उनले सोही दिन थाहा पाएको बताएकी छन । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***** विवाह गरेर घरमा गएपछि उनलाई घरमा पनि परिवारका सदस्यले निकै दुख दिने गरेका थिए । परिवारमा निकै 'दु'ख सहेकी उनलाई श्रीमानले भारतमा लिएर गएका थिए । भारतमा गएपछि उनलाई श्रीमानले रातीमा काममा जान पठाए । जसको घरमा काम गर्न गइन् उनले तँलाई तेरो श्रीमानले बेचेर नेपाल फर्किसक्यो भनेर सुनाएपछि थाहा पाएको बताइन् । अहिले उनी अस्वा'स्
९ बर्षिय सचिन परियारले तोडे सबै रेकर्ड, लोक गीतको इतिहासमै २४ घण्टा नबित्दै ट्रेन्डिङमा
गुल्मी मुसिकोट थाई घर भएर अहिले तम्घासमा बसोबास गरिरहेका र केही समय अगाडिबाट टिकटकदेखि युटयुबसम्म सबैमा आफनो हसाउने कला, जादूमय स्वर र मिठो बोलीले भाईरल भएका भाई सचिन परियारको पहिलो गित “ओठ खोलेर” सार्बजनिक भएको छ। महेन्द्र भण्डारीको लय र एरेन्ज रहेको यो गितमा सबै लगानि सबिन क्षेत्रीको रहेको छ। सचिनले रबिना बसेल अर्की भाईरल नानीसँग स्वरमा स्वर मिलाएर यो गित गाएका छन भने यसमा थप साथ दिएका छन स्वरमै चर्चित गायक अर्जुन कुवर र अश्मिता बुढाथोकीले भने शब्द रहेको छ गणेश अधिकारी र थेगो महेन्द्र भण्डारीको। जसलाई निर्देशन गरेकी छिन गुरुआमा स्मिृति तिमिल्सिनाले । जसमा चर्चित मोडल करिश्मा ढकाल, एलिना रायमाझी, अर्जुन कुवर र सबिन क्षेत्रीको पनि अभिनय र स्वयम सचिन परियारको पनि जोडदार अभिनय र कमेडी रहेको छ । सचिनको गित २४ घण्टा नबित्दै युट्युबको ट्रेन्डीङ नम्बर ३ मा पर्न सफल भएको छ।
डिभोर्सपछि पनि मेरो करियर सिध्याउन खोजिँदैछ (भिडियो)
कलाको सिमाना हुँदैन । कुनै भूगोलको परिबन्धमा पनि बाँधिन सक्दैन । न त कलाको जात र थर नै हुन्छ । कलाले जीवन बोल्छ, प्रकृतिको अनुपम उपहारलाई वर्णन गर्छ । जगतलाई सचेत गराउँछ । तर, समाजको ऐना बनेका सबै कलाकारको जीवन भने रसपूर्ण हुँदैन । उनीहरुले गायका, अभिनय गरेका, लेखेका जस्तै केही दुःखदायी कथा आफ्नै जीवनमा भोगेका हुन्छन् । भारत आसामकी गायिका मिलन नेवार गायनको कर्मभूमि बनाउन नेपाल छिरिन्, नेपालीको मन पनि जितिन् । नेपालीमूलका धेरै भारतीय नागरिकले आफ्नो कलाको कर्मस्थल नेपाललाई बनाएका छन् । यस्तै धेरै नेपाली भारतमा पुगेर कलाको क्षमता उजागर गरेका छन् । यहीको निरन्तरतामा गायिका मिलन पनि नेपाल आइन् । एकाएक गायकी क्षमता र सुमुधर स्वरकी धनी मिलनले नेपालीको मन जितिन्, सबैको मन मनमा बस्न सफल भइन् । यतिमात्रै होइन उनको कर्मभूमि मात्रैमा नेपाल समिति रहने, वैवाहिक सम्बन्ध पनि नेपालसँगै गाँसि